လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 17W အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဖြစ်လာ | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 17W အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဖြစ်လာ
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 17W (ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအမည် ONDOY) သည် စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ဝဝး၃ဝ နာရီတွင် အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ စတင်ရောက်လာပြီဖြစ်ပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမည် KETSANA ဟုပေးထားပြီဖြစ်ပါသည်။
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း KETSANA သည် တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်း မနီလာမြို့၏ အနောက်ဘက် မိုင် ၂၇ဝ ခန့်၊ ဟောင်ကောင်မြို့ တောင်ဘက် ၄၆၅ မိုင်ခန့်နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဒါနန်းမြို့ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၅၃ဝ ခန့်တွင် ဗဟိုပြုနေပါသည်။
လာမည့် ၃၆ နာရီအတွင်း အင်အားပိုမိုကောင်းလာကာ အဆင့်-၁ (CAT-1) မုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာမည်ဟုခန့်မှန်းထားပြီး – CAT-1 အဆင့်သို့ရောက်ရှိချိန်တွင် ဗီယက်နန်နိုင်ငံ ဒါနန်းမြို့ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၁၅ဝ ခန့်တွင် ရောက်ရှိဗဟိုပြုနေမည်ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားပါသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် အနောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီလျှင် ၁၆ မိုင်နှုန်းဖြင့်ရွေ့လျားလျှက်ရှိနေပြီး၊ ဗဟိုပြုရာနေရာတွင် မုန်တိုင်းဒီရေအမြင့် ၁၈ ပေအထိ ရှိကြောင်း TSR သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။
ယနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၂ နာရီ ၄ မိနစ်အချိန် ရရှိသော WUND အခြေပြပုံ
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: KETSANA, tropical-storm, weather.2Comments »
2 Responses to “လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 17W အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဖြစ်လာ”
မုန်တိုင်း ONDOY(17W-KETSANA) ကြောင့် ဖိလစ်ပိုင်တွင် ၅၁ ဦး သေဆုံးပြီး ၂၃ ဦးပျောက်ဆုံးလျှက်ရှိ – China News မှ တိုက်ရိုက်ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။
« လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 17W (ONDOY) 5days forecast
ဗီယက်နမ်နှင့်လာအိုတို့သို့ KETSANA သတိပေးချက်ထုတ်ပြန် »